स्वास्थ्य गाईको दुध कि भैंसीको ? तौल घटाउनका लागि कुन उपयोगी र किन ?
Nepal Online Patrika: दुध पोषणतत्वले भरिपूर्ण हुन्छ त्यसकारण यसलाई स्वस्थ खान्कीमा समावेश गरिन्छ । दुधमा पाइने पौष्टिक तत्व बालबालिका, वृद्ध–वृद्धा र सबै खालका उमेर समूहका लागि आवश्यक छ । यदि कोही व्यक्ति शाकाहारी छ भने उसले त प्रोटिनका प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो खान्कीमा दुध समावेश गर्नैपर्छ । के तपाईंलाई गाईको दुध अलि हल्का हुन्छ भन्ने थाहा छ ? र भैंसीको दुधको तुलनामा यसमा क्यालोरी पनि कम हुन्छ । तसर्थ, यदि तपाईं आफ्नो तौल घटाउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भने गाईको दुध रोज्नुहोस् । तर पोषणको कुरा आउँदा कुन दुध रोज्ने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । गाई र भैंसी दुबैको दुध मानव शरीरका लागि पोषिलो हुन्छ । यी दुबै प्रकारको दुधमा क्याल्सियम, भिटामिन बी १२ र फोस्फोरस पाइन्छ । यो प्रोटिनको राम्रो स्रोत भएकोले यसले हड्डी बलियो बनाउन र यसलाई सुख्खा हुनबाट जोगाउँछ । यहाँ दुधका केही फाइदाबारे कुरा गरिएको छ ।
यद्यपि, यी दुबै प्रकारको दुधले शरीरलाई फाइदा नै पुर्याइरहेको हुन्छ । ल्याक्टोस्सँग एलर्जी नभएका व्यक्तिले सबै प्रकारको डेरी उत्पादनको सेवन गर्न सक्छन् । साथै आफ्नो शरीरको आकार र जीवनशैली अनुसार दुध सेवन गर्नुपर्छ |
कोरो’नाभा’इरसबाट ब’चे’र ‘यौ’न स’म्ब’न्ध’ कसरी राख्ने ? वैज्ञानिकले दिए यस्तो सल्लाह
विश्वका अ'धि'कां'श देशहरुमा ल'कडाउन विस्तारै खुकुलो बनाइँदैछ । यद्यपि को'रोनाभा'इरसको ख'तरा भने कायमै छ । यतोमा जो'डीहरुलाई हार्वर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरुले केही सल्लाह दिएका छन्...
कोरोना भ्याक्सिन बनाउने कम्पनीले झुक्किएर यौ न उत्तेजक औषधि बनाएको थियो
अमे रिकी फा र्मास्युटिकल कम्पनी फा इजर र जर्मन कम्पनी बायोएनटेकले बनाएको कोरो नाभाइ रस भ्या क्सिनलाई बेलायतको निया मक नि कायले सुर क्षित भएको घो षणा गर्दै प्रयोगको लागि स्वी कृति दिएको छ ।